I-Google Pixel 2 sele inomhla wokukhutshwa kwaye iza kufika nge-SD836 | I-Androidsis
I-Google Pixel 2 iya kwenziwa yi-HTC kwaye iya kuba nenkqubo yokusebenza ye-Android yakutshanje yazo zonke, i-Android 8.0 Oreo, kwaye ngoku siyazi ukuba kufuneka ityhilwe nini ngokusemthethweni.
Umhla wokukhutshwa kukaGoogle Pixel 2 waqinisekiswa ngu Evan Blass Kwi-twitter. IBlass ngomnye wemithombo ethembekileyo yokuqaliswa kweselfowuni kunye nezixhobo. Enye yeendaba zamva nje ekwabelwana ngazo nabalandeli bakhe yayikukuba IPixel 2 iya kuba nayo iprosesa yeQualcomm Snapdragon 836.
Isiganeko esizinikezelwe kwiGoogle Pixel 2 siya kuqhubeka 5 ngo-Oktobha, Oko kuthetha ukuba iyakufika emva kokukhutshwa okukhulu kokuwa, kodwa ngaphambi kokungeniswa kwe Huawei Mate 10. Eyona nto inomdla kukuba umhla we-5 ka-Okthobha u-2017 uwela nje kunyaka omnye nangosuku olunye emva kokunikezelwa kwePixel yokuqala.
Ngokumalunga neenkcukacha zobuchwephesha zeselfowuni, kunokwenzeka ukuba iGoogle Pixel 2 ibonelele Imemori ye-6 GB ye-RAM, isithuba se I-64 GB yokugcina ukugcinwa kwedatha kunye nokuphuculwa kwekhamera.
Izixhobo eziphathwayo zikaGoogle zesizukulwana sesibini, ezixhaswe yi-Snapdragon 836 SoC's, ziya kutyhilwa ngo-Okthobha u-5.
- Evan Blass (@evleaks) Agasti 24, 2017
Njengonyaka ophelileyo, kulindeleke ukuba ibekho iimodeli ezimbini yeselula. Inguqulelo yeXL inokuzisa isikrini I-6 intshi ye-QuadHD, Ngelixa elincinci liza kuhlala kwi 5 intshi ngesisombululo esipheleleyo seHD.
Phakathi kwezinye izinto, iGoogle Pixel 2 iya kuba njalo i-smartphone yokuqala entsha kulo nyaka yokuba nenkqubo yokusebenza ye-Android 8 Oreo, nangona ukusukela kule nyanga uGoogle sele ebonelela ngeqonga elitsha kwisizukulwana sokuqala se I-Google Pixel kunye neNexus.
Njengoko ilungile iGoogle Pixel 2, isaza kuba nayo ingxaki efanayo neyandulelayo, ngakumbi umba wosasazo. Imodeli yangaphambili yayifumaneka eMelika, kodwa iPixel XL yayinesitokhwe esilinganiselweyo, ngelixa eYurophu inokuthengwa kuphela e-United Kingdom ngenxa yesivumelwano ne-United States.
Okwangoku ezi kuphela kweenkcukacha ezaziwayo malunga neGoogle Pixel 2, kodwa kwakamsinya nje ukuba sazi iindaba, siya kuba lapha ukuze sabelane nawe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Google Pixel 2 sele inomhla wokukhutshwa kwaye iza kufika ngeSpapdragon 836